Si kastaba ha ahaatee SMART aad tahay aad si qalad ah u tirtiri kartaa mails in your computer ama telefoon. Xaaladaha qaarkood xisaabtaada la jabsaday karo iyo qofka xaasidnimo ah si ula kac ah u tirtirto laga yaabaa in aad mails. In xaaladda noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa in wax walba u yimid inuu mawqif weli tan iyo mails tirtiray ku jiri kara macluumaad muhiim ah. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inuu ku lifaaqan in ay tahay in aad u dirto kulliyad ama password xaqiijin ah. Ama jidka oo dhan content tirtiray waa sidoo kale muhiim ah ama aad u yaaban sida iyaga dib si aad u hesho mailkooda.
Marka aad tirto faylasha ama la tirtiro iyada oo qof saddexaad oo weli aad u soo kaban karto iyaga. Hoos waxaa ku aragti ah shan siyaabood oo ay ku soo kabsadaan ka mails tirtiray.
Habka 1. Check folder tirtiray ama recycle bin
Habka 2. database mail ah
Habka 3. Check server dib ugu
Habka 4. Isticmaalka Email File kordhin
Habka 5. Isticmaalka Wondershare Data Recovery
Habkani idiin samayn doono, haddii aadan ka shubeen qashinka. The files tirtiray ku kaydsan yihiin, waayo culeyskooda balanbaallis oo kaliya haddii aad rabto in aad soo kabsado mails ah.
Step1. Log in xisaab email in aad la tirtiro xogta ka. Waxaad u baahan tahay in la xiran internetka si ay u qabtaan hawshan
Step2. Marka uu furmo suuqa email ah, guji xasuuqeen icon . Waxaa inta badan u muuqata dhinaca bidix ee suuqa kala Email ah.
Tallaabada 3. mails ayaa n lagu soo bandhigi doonaa. Waxaad calaameysaa dhammaan mails in aad rabto inuu ka soo kabsado
Tallaabada 4. . Riix dhaqaaq sare ee suuqa kala dooro meesha aad doonayso in aad dib u hesho. Tusaale ahaan haddii aad xulan mailkooda ay u soo si folder mailkooda.
Si aad u soo ceshano ee emails tirtiray in aan dulfuulan waxaad isticmaali kartaa mail database sida Outlook Express, suuqa kala Vista. Si emails is haysta waa in ay sameeyaan iyaga yar si fudud u helaan. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka loo isticmaalo in mail Apple.
Step1. Log in xisaab email in aad tirtiray waxyaabaha ka dib markii ay diiwaanka.
Step2. dooro Items tirtiray folder
Step3. Markaas xaq guji farriimo la doonayo in la soo celiyo oo guji dhaqaaq. Duldhig Kursor ilaa iyo halka loo doortay in ay la soo celiyo.
Muuqaalka Web App waa adeeg email ah kuu oggolaanaysa in aad u helaan iyo emails aad dib u soo celiso. Tani waa browser web in kabanayso emails dhawaan tirtiray iyo emails si joogto ah tirtiray a. Waxay leedahay interface user saaxiibtinimo ka dhigaya shaqeeyaan fudud.
Tallaabada 1. Raadi Muuqaalka app web iyo calaamad in adiga oo isticmaaleya isticmaale account
Tallaabada 2. Click on waxyaabaha folder tirtiray
Step3. Hubi fariimaha si ay markaas la raadsan guji dhaqaaq oo ugu dambeyntii Folder goobta sida mailkooda
Step4. Haddii waxa la tirtiray si joogto ah guji Ladnaansho files tirtiray .
Waxaad tirtiray files kale oo ka soo kordhin file email ugu soo gaabiyo EML. Files EML waa meelo emails badbaadiyey ku kaydsan yihiin. Qaab file EML Tani waa wax soo saarka ka ah geedi socodka Microsoft Outlook. Files waxa ku jira kubad madax ah, taas oo uu leeyahay cinwaan laba emails, waayo qaataha iyo diraha, lifaaqyada jirka iyo hyperlinks ee emails ah. Qaab file EML waxaa cabiran in waafaqsaneyn MIME RFC 822 si aad u furi karaan database-email sida Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Apple Mail, Microsoft caga oo IncrediMail. Halkan waxaa ku qoran liiska file EML kordhin
Haddii aad u tirtiray farriimo email aad oo ay ku badbaadnay internetka waxaad ka gali kartaa in email database si ay u soo ceshano.
Step1. Gelitaanka in si aad Muuqaalka muujiyaan, Outlook, ama mail Apple iyo raadiyo-lada ah.
Step2 . Haddii taasi shaqeyn weydo furan sahamisa file
Step3. Riix Search iyo nooca qaab file ah emails tusaale ahaan aad ka .eml Waa sahlan tahay faylasha lagu soo bandhigi doonaa
Wondershare Waa aalad awood leh soo kabashada xogta kuu oggolaanaysa in aad dib u soo ceshano files tirtiray oo ay ku jiraan email. Waxaad kaliya in ay soo bixi daaqadaha ama version Mac ku xiran tahay nidaamka qalliinka aad la isticmaalayo oo raac tallaabooyinkan.
Step1. Dooro Recovery Mode
Marka aad abuurtaan barnaamijka aad jirto Standard iyo Wizard hab. Isticmaal hab caadiga ah marka aad arki doonaa File Khasaaray Recovery, Recovery ah Barzakh, File, iyo Soo-kabashada xogta ceeriin ah. Dooro Recovery File Khasaaray .
Step2. Dooro nooca File iyo Location
Wixii kiiskan waxa kaliya ee aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado emails si ay doortaan Emails iyo Riix Next in ay doortaan jidka. Dooro meesha aad ka lumay emails iyo guji Next . Si loo isticmaalo ka soo kabashada adag loo sahlo Deep Scan bilaabay habka iskaanka ah.
Step3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan Email
Kadib markii geedi socodka iskaanka waa dhameystiran ka soo kabsaday lagu soo bandhigi doonaa. Mark faylasha la doonayo email iyo guji soo kabsadaan ka dibna iyaga ku badbaadin. Intaas ka dib waxa aad iyaga dajiyaan karaa in email database aad.
Mar kasta oo aad tirtirto emails aad, ka joojin ah barnaamijka, si aad u fogaado xaaladood oo overwriting. Fiiri aad u emails tirtiray qashinka ama recycle bin ka hor fulinaya wax soo kabsado. Ka dib markii ay soo kabsaday mails tirtiray mar walba amaan faylka la marsiiyey ay dhacdo in laga yaabo in aad rabto in aad soo mustaqbalka. Tani waxa kale oo uu tashiilo waqtiga ha tan in aad bilowdo iskaanka ah.
Inkasta oo ay jiraan siyaalo ee soo kabsaday emails tirtiray sidoo kale waa kuwa caqliga leh si aad emails ammaan ah. Sidaas Sidee baad dos sidaas?
1. Had iyo jeer loo hubiyo in aad abuur eraygaaga sirta ah xooggan ee cinwaanka emailkaaga oo la isticmaalayo warqado lambarada iyo jilayaal
2. Ma dhabarka ah ilaa aad emails in drives dibadda ama iCloud.
3. emails aad Archive
4. Had iyo jeer gasho oo ka soo baxay cinwaanka email haddii aad gasho in qalab shisheeye.
Ka taxaddar in aad xamili fariimaha aad si looga fogaado in dhib ah oo raadinaya siyaabo inuu ka soo kabsado Emails.
> Resource > Ladnaansho > Sida loo soo ceshano emails tirtiray